OKE IHE MBEREDE ỤGBỌALA ATAALA ISI MMADỤ N’ENUGWU – hoo!haa!!
OKE IHE MBEREDE ỤGBỌALA ATAALA ISI MMADỤ N’ENUGWU
ENUGWU: Njinji jiri n’Enugwu n’isi ụtụtụ taa na New Haven mgbe ụgbọala G Wagon ọgbara ọhụrụ kụpịara ụgbọala abụọ na keke abụọ.
Site na nchọpụta anyị, onye nya ụgbọala ahụ nọ n’oke ọsọ gafere otu narị kilomita kwa elekere (kilometre per hour) nke mere o jiri hapu okporo ụzọ wee kụrụ ụgbọala nọrọ onwe ha n’akụkụ na-aga. O buuru ụzọ kụọ ndi keke abụọ nlọrọ onwe ha n’akụkụ ụzọ. Ọ kụkwara ụgbọala Nissan Karisma nke onye nwe ya bụ onye na-akpọ egwu a na-akpọ DJ FX2.
Ụgbọala ọzọ ọ kụkwara bụ ụgbọala RAV4 Jeep, nke gbapụziri ọsọ n’ike bịa dakanye n’ebe ndi mmadụ na-aṅụ mmanya n’ụgba plaza nke bụ na ọ bụrụ na ọ bụghị ụgbọala RAV4 ahụ ọ kụrụ, ọ kara ịkụpịa ndi ahụ na-aṅụ mmanya ebe ahụ. Ụgbọala G wagon kụrụ ụgba ugboro abụọ tupu chilie ọkpa elu.
Ozi anyị nwetara bụ na onye nya ya bụ ụgbọala bụ akajiakụ na-ewu ewu n’Enugwu a na-akpọ Ọdụm. Nwamadị ahụ bụ onye Akụ dị n’okpuru ọchịchị Igbo-Etiti nke Enugwu Steeti nwere ọtụtụ ụgbọala nke akara ndebanye aha ha bụcha Ọdụm1, Ọdụm2, Ọdụm3, wdg.
Anyị nụkwara na otu onye keke nwụrụ ka ebu ya gaa ụlọọgwụ dị iche iche mana ha ekweghi anabata ya. N
Previous Post: STEETI ENUGU NỌ N’AKA CHUKWU EBE MỌNỊKA UGWUANYỊ NỌ N’ỌRỤ
Next Post: ỤLỌ OMEBE IWU, SINETI AGWALA NDI UWE OJII NA NDI AMỊ KA HA PỤỌ N’ỤZỌ…